Nyocha nke nyocha nyocha BQ Ciclop 3D afọ abụọ mgbe e mechara ya | Akụrụngwa n'efu
Anyị na-enyocha nyocha BQ CICLOP 3D
na CES nke afọ 2015 bq ewetara na ọha ya bq CICLOP 3D nyocha. Ọ bụ ọrụ mmeghe nke ụlọ ọrụ ahụ na ndị ọrụ ya niile nyere ọrụ dị mkpa maka mmepe nyocha ahụ. Wayzọ ahụ ndị ọrụ nwere ike ịmekọrịta n'echiche na mmelite nke ha.
Ke ibuotikọ emi anyị ga-enyocha otú ngwaahịa a si mee agadi ma ọ bụrụ na ọ bara uru iji nweta ihe nlereanya nke njirimara ndị a.
1 Teknụzụ ejiri maka nyocha 3D
2 Akụkụ nke nyocha BQ Ciclop 3D
3 Ighapu, gbakọta ma wụnye nyocha BQ Ciclop 3D
5 Nyocha mbụ
6 Ọnụahịa na nkesa
Teknụzụ ejiri maka nyocha 3D
Ciclop bụ igwe nyocha dabere na 3D triangulation nke jikọtara a ụzọ lasers projecting abụọ ahịrị na ihe na-agbanwe agbanwe n'elu ikpo okwu na-agbagharị. Igwefoto na-ejide ma textures na ọdịdị nke ihe nyocha.
Ihe ojii na-enweta ọkụ ọkụ laser linear na ihe mmetụta nke na-agafe ọnọdụ nke isi ọ bụla nke ogwe achọpụtara na ngwanrọ nwughari ọ na-edekọ ya na nchekwa data ya na ndị ọzọ iji nwee ike mepụta ihe oyiyi 3D zuru ezu. Ozugbo ihe ahụ gbanwere ọdịdị ya ma ọ bụ ọnọdụ ya, ọkụ ọkụ ahụ apụtaghị na otu ụzọ ahụ, yabụ na a naghị eduzi ya n'otu mpaghara igwefoto ahụ ya mere edebanye aha dị iche na ihe nlele ahụ ...
Iji hazie ozi niile enwetara site na igwefoto ma jikwaa nhọrọ na oke nyocha, bq emepewo Horus, a multiplatform na free ngwa.
Ihe nyocha BQ Ciclop 3D na-enye ohere nyochaa ihe ruru 205mm n'obosara site na 205mm n'obosara ka a mkpebi ruo 500 microns n'ime oge nke 5 nkeji.
La ngwá electronic nke nyocha mejupụtara a Arduino dabere na mbadamba, Igwefoto Logitech, 2 linear lasers na stepper moto.
Akụkụ nke nyocha BQ Ciclop 3D
Oke i scanomi size: 205mm (dayameta) x 205mm (elu).
Gbasara Anya / Ihe mmetụta: Igwefoto Logitech C270 HD 1280 x 960
Mkpebi: Igwe okwu 500
Nyocha akụkụ: (x) 450 x (y) 330 x (z) 230 mm
Ianomi ebe inyoghi inyoghi: (r) 205 x (h) 205 mm
Nyocha: 2 n'arọ ruru
Izi ezi nyocha: micron 500
Na-enyocha ọsọ: 3-4 min ihe dị ka.
Nzọụkwụ kwa ntụgharị: N’agbata 1600 na 160
Ọ dị ka ọ bụ ezie na ọ bụrụla afọ ole na ole kemgbe mmalite nke ngwaahịa a, nhọrọ iji nweta ngwaọrụ na ọnụahịa ezi uche dị elu abawanyela na Igwe nyocha ụlọ ugbu a nwere otu atụmatụ dịka ụdị bq.
Ighapu, gbakọta ma wụnye nyocha BQ Ciclop 3D
El mgbakọ dị mfe na emeputa ka akwukwo ya nke ọma. Dabere n’otú i nwere nkà isi soro ntuziaka ahụ o nwere ike were n’agbata nkeji iri atọ na otu awa ka akụrụngwa akụrụngwa. Anyị agwụchaala ya ngwa ngwa, na-enweghị oge ọ bụla ma ọ bụ mezie ihe ọ bụla n'ihi ịkọwahie ntuziaka ahụ.
Emeputa ahu ezigala vidiyo na youtube na nke dị nnọọ 3 nkeji egosi n'ụzọ zuru ezu otú anyị kwesịrị idowe niile iberibe.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na akwụkwọ ntuziaka dị n'asụsụ dị iche iche na-eweta ngwaahịa a, anyị na-akwado ka ị gafere site na nbudata weebụ Kedu ihe ị nwere maka ngwaahịa gị?. Na ha ebipụtala ihe niile ị chọrọ iji ihe nyocha gị. Site na akwụkwọ ntuziaka gaa na nsụgharị Horus kachasị ọhụrụ.
Anyị na-ahụta ya ọchị mgbe niile mgbe anyị zụtara ngwaahịa nwere akụkụ nke ndị na-ebi akwụkwọ FDM bipụtara. N'ihe banyere nyocha, niile plastic mmiri e biri ebi na PLA. O siri ike na obere ụlọ ọrụ ga-eme omume a mana ọ na-esiri anyị ike iche na usoro a nwere ike ịba uru karịa ụlọ ọrụ dịka bq karịa ịkpụzi ọgwụ. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịchọpụta nke ahụ mbipụta akwụkwọ nke ihe ndị a dị mma.
Maka ọrụ ziri ezi nke nyocha ahụ Horus software na ndị ọkwọ ụgbọala kamera Logitech kwesịrị ịwụnye na incorporates usoro, ihe a niile nwere ike ịchọta na emeputa web portal
Ozugbo emere buut mbụ, anyị na-achọpụta na sọftụwia bụ ọrụ maka imelite ngwa ngwa nke bọọdụ arduino Nke tinye. Ọ bụrụ na anyị mere nyocha nke anyị anyị nwere ike iji bọọdụ arduino ọ bụla nke ahụ na-ezute nkọwa ndị zuru ezu nke onye nrụpụta. Nkọwa dị oke mkpa banyere ezigbo ọrụ nke bq.
Anyị nwere ihe niile gbakọtara ma jikọọ na PC, oge eruola ịwụnye ngwanrọ ma rụọ nyocha mbụ anyị.
Nsogbu mbụ anyị zutere bụ na site na ịnweta kamera weebụ dị iche iche jikọọ na PC horus enwebeghị ike ịchọpụta nke ọ ga-eji na-akpaghị aka na sọftụwia enweghị ike igosi kamera weebụ ọ hụrụ nke ọma. N'ime mgbalị ole na ole anyị chọtara kamera ziri ezi, ọ dịghị ihe dị njọ.
Anyị nwere ike i scanomi naanị na-ebupụta ma ọ bụ jide agba dị ka nke ọma, na-eji laser ma ọ bụ naanị otu. Ma e nwere enweghị ngwụcha nhọrọ anyị nwere ike ịgbanwe iji bulie nyocha ahụ na njirimara gburugburu ebe anyị na-eme nyocha ahụ.
Mbụ anyị Doppler bụ ọdachi, nke na aka nke ọzọ bụ ihe ezi uche dị na ya, anyị ulo oru i scanomi enweghị na-ewere ihe ọ bụla echiche. Nleta nleta na ụlọ ọrụ ndị na-emepụta ihe na-akụziri anyị nke ahụ sistemu triangulation laser nwere nnukwu mmetụta na ọnọdụ ebe 2 lasers jikọtara ya n'ụzọ zuru oke kwekọrọ na etiti ntụgharị ihu igwe. Agbanyeghị, BQ elegharala ihe dị mfe anya dị ka ịka akara n'etiti etiti ikpo okwu ahụ. Oghere, kompas, akwụkwọ, pen na nsogbu edozi. Ozugbo emechara laser ahụ, ogo nke ihe nyocha ahụ emeela ka ọ dịkwuo mma.
Mgbe inyocha ihe anyị na-enweta ntupu nke isi anyị nwere ike ịchekwa na .ply format mana faịlụ a enweghị ike iji ya na ngwa nbipute ọ bụla n'ihi na usoro a na-emebu bụ .stl. Nleta ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ihe na-eme ka o doo anya na horus software adịghị n'ịwa .stl faịlụ iji nweta a format anyị ga-eji ọzọ na-emeghe isi mmemme.
Inwe iji ngwanrọ nke abụọ iji nweta ihe achọrọ achọrọ na-eme ka ahụmịhe nke iji nyocha ahụ dị obere. Otú ọ dị bq edeputara ihe nile a choro iji mezue oru a.
Na onyonyo anyị nwere ike ịhụ ụdị nyocha na onyogho 3D enwetara
N'ihi ule ndị e mere, anyị nwere ike ikwenye nke ahụ ihe ga - esi na ya pụta ga-adị nnọọ iche dabere na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mgbanwe. Site na ọkụ nke ebe anyị nwere nyocha ahụ, izi ezi nke mmezi nke anyị rụrụ ma ọ bụ ọbụlagodi na agba nke ihe nyocha ahụ gụnyere.
Otu n'ime ndozi ndị ụlọ ọrụ na-atụ aro bụ nyochaa ihe a otutu oge na uzo di iche iche nke mere na ntupu nke isi nwere opekempe ọnụọgụ nke mpaghara nke ọkụ ọkụ laser enweghị ike iru.
Ọ bụ ezie na akụrụngwa a anọwo na ahịa maka afọ 2 na Enweghị ya na weebụsaịtị nke ndị nrụpụtara, anyị ka nwere ike ịchọta ya na ntọala ndị ọzọ maka a atụmatụ ego nke € 250.
Nyocha ụdị 3D bụ usoro dị mgbagwoju anya nke etinyere ọtụtụ usoro na akụrụngwa na-efu ọtụtụ puku euro. Anyị kwesịrị iche na enweghị ike gịnị ka anyị ga-enweta jiri ngwa ụlọ ọ bụla.
Ndi otu a nwere oke mma / ọnụego ruru na afọ 2 mgbe o gosipụtara na ahịa ọ gafeela n'oge. Providedzọ nke ndị nrụpụta nyere iji kwado ahụmịhe onye ọrụ dịka o kwere mee.
Anyị enwetala nsonaazụ dị iche iche n'etiti ihe dị iche iche anyị nyochara, mana site na ndidi anyị nwere ike ịnweta ụdị nke na-ekwesị ntụkwasị obi na nke mbụ.
Ọ bụ ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka ndị ahụ na-atọ ụtọ mbipụta 3D na-atọ ụtọ usoro okike niile na anaghị atụ anya nsonaazụ zuru oke site na oge mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Anyị na-enyocha nyocha BQ CICLOP 3D
Joel Ontario dijo
Na-akpali mmasị enyi enyi, m na-eme a na-amụ nke dị 3D scanners na ahịa, ị nwere ike inyere m aka na ụfọdụ ozi banyere ụlọ ọrụ BQ
Zaghachi Joel Ontuña
Ụtụtụ ọma, enwere m nyocha mana enweghị m ike ịnweta sọftụ 3d horus, ọ ga-enyere m aka ma ọ bụrụ na ị nwere ya ebe ọ bụ na ọ naghị adị na github.
M na-anọgide na-aṅa ntị na nchegbu ọ bụla.
Sculpteo na-egosi anyị igwe kwụ otu ebe nke 3D